Ịgba ịnyịnya | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Ịgba ịnyịnya
Nkọwa nke uwe kacha mma nke ịnyịnya
Agba nke ịnyịnya bụ akụkụ bụ isi nke anụmanụ. E ketara àgwà a. A na-ekpebi mkpebi ahụ ọ bụghị nanị na-adabere n'ụdị ahụ nke ịnyịnya, ma na-eburu n'uche ụcha nke manụ, aka ahụ, ọdụ, ọbụna anya. Nkewa nke uwe a doro nnọọ anya, ọ dịghị nkwenye ndị a na-ekwe. Ịnyịnya nwere ụdọ mmiri nwere ike ghara itolite nwoke ọcha, ma ịnyịnya na-acha uhie uhie enweghi ike inwe ogwe aka.
Mgbe ị na-anụ ụda nke oge ochie Russian romance banyere "otu ụzọ nke ịnyịnya n'ọdụ ụgbọ ịnyịnya ruo ụtụtụ," ị na mberede jide onwe gị na-eche: na n'ozuzu ịnyịnya ibu ịnyịnya ha bụ ndị? Maka ndị nwere mmasị ịmụta ihe niile banyere uwe a na-agbakarị agba, anyị ga-agwa ya banyere ya. Ihe e ji aha uwe ahụ amalite Ebe e si nweta aha ọdụ ụgbọ ịnyịnya na-enweghị ihe doro anya.
Miceh ịnyịnya agba: akụkọ ihe mere eme, agba agba
Ọ bụ ogologo ịnyịnya na-adọrọ adọrọ na amara ha na ebube ha: nwa ojii, n'ọnụ mmiri, na apụl ... Ihe ndị a nile nwere agba ndị nwere "anụ ọhịa" ọhịa. Miceh ịnyịnya agba - enweghị ndọtị. Akara n'akụkọ ihe mere eme na akụkọ akụkọ Ka anyị na-emeso ihe agba nke ịnyịnya ígwè. Onyinye uwe a nwere ajị anụ na-acha uhie uhie, ọ bụ nna ochie nke ịnyịnya ibu.
Ịgba ịnyịnya ibu
Ezigbo ịnyịnya bụ anụmanụ na-adọrọ adọrọ nke na-adọrọ mmasị na amara, aristocracy na ebube. Na oge nke oge a, ịnyịnya ịnyịnya nwere oke ụkọ. Ụdị a na-abịa site n'ọdụ ụgbọ mmiri, ma o nwere ụcha chacha acha. Akara akụkọ ihe mere eme Na ịnyịnya nke agba aja aja na-acha ọbara ọbara bụ anụmanụ ndị na-akwado arụsị.